Maxay yihiin Fariimaha ugu Fiican Emailka? Maxay Tahay Email Fonts Ammaan ah? | Martech Zone
Dhammaantiin waad maqasheen cabashooyinkayga ku saabsan horusocod la'aanta xagga taageerada iimaylka sanadihii la soo dhaafay sidaa darteed ma qaadan doono (waqti aad u badan) waqti aan kaga cabaado. Waxaan kaliya jeclaan lahaa in hal macmiil oo emayl weyn ah (app ama biraawsar), uu ka baxo baakadka iskuna dayo inuu si buuxda u taageero noocyada ugu dambeeya ee HTML iyo CSS. Shaki iigama jiro in tobanaan milyan oo doollar ay shirkado ku bixinayaan si ay u saxaan e-mayladooda.
Taasi waa sababta ay u tahay wax cajiib ah in la helo shirkado sida Email Monks oo ku sii nagaanaya dhinac kasta oo ka mid ah qaabeynta emailka. Xogtan ugu dambeysay, Nooca qoraalka ee E-mayl, kooxdu waxay kugula socotaa qoraal ahaan iyo sida noocyada kala duwan iyo astaamahooda loo geyn karo si loo habeeyo emaylkaaga. 60% macaamiisha emaylka ayaa hadda taageeraya noocyada farriimaha ee loo adeegsado naqshadahaaga email oo ay ku jiraan AOL Mail, Native Android Mail App (maahan Gmail), Apple Mail, iOS Mail, Outlook 200, Outlook.com, iyo emaylka ku saleysan Safari.
Waxaa jira 4 Qoys Qoraal oo Email Loogu Adeegsaday
serif - Xarafyada Serif waxay leeyihiin jilayaal leh barwaaqo, dhibco, iyo qaabab ku yaal cirifyada istaroogooda. Waxay leeyihiin muuqaal rasmi ah, jilayaal si fiican u kala fog iyo kala-dheereynta khadka, iyagoo si weyn u wanaajiya akhrinta. Noocyada ugu caansan noocyadan waa Times, Georgia iyo MS Serif.
Sans Serif - Xarfaha xarfaha 'Sans serif' waxay la mid yihiin nooca caasiyiinta ah ee doonaya inay abuuraan aragti iyaga u gaar ah oo markaa ma jiraan wax qurxin 'qurxin' ah oo ku lifaaqan. Waxay leeyihiin muuqaal rasmi ah oo sare u qaadaya waxqabadka muuqaalka. Noocyada ugu caansan noocyadan waa Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Open Sans, Roboto iyo Verdana.
Monogram - Waxaa laga soo qaatay farta qoraalka qoraalka, noocyada xarfaha waxay leeyihiin bar ama 'slab' dhamaadka astaamaha. In kasta oo si dhif ah loogu adeegsado emayl HTML ah, intabadan 'dib udhac' emaylka qoraalka cad ee emayllada MultiMIME waxay adeegsadaan noocyadaas. Akhrinta emaylka adoo adeegsanaya noocyadaas waxay siinayaan dareen maamul oo laxiriira dukumintiyada dowladda. Courier waa farta ugu badan ee loo adeegsado qaybtaan.
Digniin - Ku dayashada xarfaha gacanta lagu qoray ee waagii hore, waxa fartaasi kala saaraa waa socodka socda ee dabeecad kastaa raacayso. Noocyadan farta ah ayaa aad u xiiso badan in lagu akhriyo warbaahin la taaban karo, laakiin ku akhrinta shaashadda dhijitaalka ah waxay noqon kartaa mid culeys badan iyo indho-wareer. Marka noocyada noocaas ah waxaa badanaa loo adeegsadaa cinwaannada ama astaamaha qaab muuqaal ahaan u taagan.
Fariimaha emaylka-aaminka ah waxaa ka mid ah Arial, Georgia, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times, Trebuchet, iyo Verdana. Noocyada qaabeynta gaarka loo leeyahay waxaa ku jira qoysas aad u tiro yar, macaamiisha aan iyaga taageerinna, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoro noocyada soo dhaca Sidan, haddii macaamilku uusan taageeri karin font-ka la habeeyay, waxay dib ugu laaban doontaa font ay taageeri karto. Si aad u eegto qoto dheer, hubi inaad aqriso maqaalka Omnisend, Email Fonts Safe iyo Fonts Custom: Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Iyaga.
U hubso inaad gujiso-dhex-dhexaad ah haddii aad jeclaan lahayd inaad la fal-gasho macluumaadka.
Tags: AOL Mailtufaaxa tufaaxaArialaanaemailfarriimaha emaylkaemail suufiyadoodiiemayl farriin ammaan ahgadaal gadaal fartafarriimaha dib u dhacafarriimaha emaylkaGeorgiaHelveticaMacluumaadka IOSLucidamonogramNative Android Mail App (maahan Gmail)Muuqaalka 200Outlook.comEmail ku saleysan Safarila’aanserifUgu codka badanTahomaTimesTrebuchetsawiradaVerdana
Jul 28, 2017 markay ahayd 10:04 AM
Hi Douglas, maqaal qosol iyo farxad leh in la akhriyo. Waxaan su'aal ka weydiin lahaa tan "60% macaamiisha emaylka hadda waxay taageeraan noocyada caadada ah ee loo adeegsado naqshadaha emaylkaaga". Ma jiraa mashruuc socda ama tiknoolajiyad cusub oo taas ugu dhowaanaysa 100%?
Jul 28, 2017 markay ahayd 10:06 AM
Wow, waxaan jeclaan lahaa! Waxaan u maleynayaa inay tahay isku darka isticmaalayaasha aan waligood cusbooneysiin iyo sidoo kale heerarka liita ee emaylka. Waa nasiib darro dhammaanteen!